Mgbanwe ihu igwe nwere ike igbu NASA | Netwọk Mgbasa Ozi
NASA nwere ihe egwu ịla n'iyi n'ihi mmetụta nke mgbanwe ihu igwe, dịka akọwara na weebụsaịtị nke Agencylọ Ọrụ. Mbuli elu nke oke osimiri, ya na mmụba nke ike na ugboro ole ajọ ikuku mmiri, nwere ike mebie ụlọ John F. Kennedy Space Center na Cape Canaveral (Florida), yana ọtụtụ ihe ntinye na ogige. ebe ndị astronauts na-azụ.
N'ịnọ nso n'ụsọ Oké Osimiri Atlantic, ọ dị ha mkpa iji hụ na nchekwa nke ebe ndị mepere emepe na mpaghara ahụ, ya mere, ha nwere olileanya izere idei mmiri nwere ike ime site na iwube mmiri, na ịkwapụ ụfọdụ tankị na ụlọ nyocha na mmiri site n'oké osimiri.
N'agbanyeghị nke ahụ, ihe si na okpomoku zuru ụwa ọnụ na-apụtawanye na-apụta. Ihe atụ nke a bụ etu oke osimiri ji arịgo n’afọ ndị a. Dị ka ị pụrụ ịhụ n’obodo a, site n’afọ 1880 ruo ugbu a ọ biliela 20 sentimita, na omume ahụ apụtaghị na ọ ga-agbanwe n'afọ ndị na-abịanụ, ebe ọ bụ na okpomọkụ na-aba ụba na, ka ha na-eme ya, ice dị na mkpanaka na-agbaze, na-eme ka mmiri nke oké osimiri dị elu.
O doro anya na, ihe bụ nsogbu maka ụwa bụkwa nsogbu NASA. Oké mmiri ozuzo, yana oke ifufe, na-ebute ọtụtụ mbibi na erslọ Ọrụ ya, yabụ ndị injinia nke John F. Kennedy Space Center haziri usoro nke ájá ájá na ahịhịa iji chebe ya pụọ ​​na nnukwu ebili mmiri. Mana nke a abụghị ihe ngwọta na-adịgide adịgide: ọnụ ọgụgụ ndị dị n'ụsọ oké osimiri na-aba ụba, dịkwa ka ọ na-eme ka ala ahụ na-ebelataYa mere, ha ga-emepụta atụmatụ ogologo oge.
Iji gụọ ọmụmụ ihe NASA kwadebere, pịa ebe a (Ọ bụ n’asụsụ Bekee).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Mgbanwe ihu igwe nwere ike igbu NASA